फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेण्ट बैङ्क : कम्पनी विश्लेषण (बुधवार, ६ मङ्सिर २०७४) | गृहपृष्ठ
Home लगानी फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेण्ट बैङ्क : कम्पनी विश्लेषण (बुधवार, ६ मङ्सिर २०७४)
फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेण्ट बैङ्क : कम्पनी विश्लेषण (बुधवार, ६ मङ्सिर २०७४)
कम्पनीको गत असोज ८ गते सम्पन्न आठौं वार्षिक साधारणसभाले १५ प्रतिशत बोनस र कर तिर्न शून्य दशमलव ७९ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । साथै, उक्त सभाले बोनसपछि ५० प्रतिशत थप हकप्रद विक्री गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
कम्पनीको खुद नाफा २ करोड ४१ लाख पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करीव ६० प्रतिशतको वृद्धि हो ।
कम्पनीले पूँजी वृद्धि भएसँगै प्रतिशेयर आम्दानीलाई सन्तुलनमा राख्न राम्रै प्रयास गरेको देखिन्छ । यो अवधिमा उसको प्रतिशेयर आम्दानी २२ दशमलव ७४ रुपैयाँबाट घटेर २१ दशमलव १५ रुपैयाँमा आइपुगेको छ ।
जगेडा कोषमा ६९ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । जगेडा कोषमा ९ करोड ६० लाख छ । अघिल्लो वर्ष यही त्रैमासमा कम्पनीको जगेडा कोषमा ५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ थियो ।
सापटी रकम ९ प्रतिशत वृद्धि भएर ३ अर्ब ५२ करोड पुगेको छ भने कर्जा सापट २५ प्रतिशत वृद्धि भएर ३ अर्ब ६९ करोड पुगेको छ ।
प्रमुख आम्दानीको स्रोतमा रहेको खुद ब्याज आम्दानी ५४ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । कम्पनीले खुद ब्याज आम्दानीबापत ४ करोड ८ लाख कमाएको छ । यसमा कम्पनीले २९ लाख ४१ हजार रुपैयाँ प्रोभिजन गर्नुपरेको छ भने जोखीम कोषबाट रकम फिर्ता गरेको छैन ।
सञ्चालन नाफा ३ करोड ७९ लाख रहेको छ । यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा ६० प्रतिशत बढेको पाइन्छ । अघिलो वर्ष कम्पनीले सञ्चालन नाफा २ करोड ३६ लाख कमाएको थियो ।
पूँजी कोष लागतमा वृद्धि भएको छ । ३ दशमलव ७२ प्रतिशत रहेको पूँजी कोष लागत वृद्धि भएर ९ दशमलव ४४ पुगेको छ ।
कम्पनीले प्रकाशन गरेको वित्तीय विवरणअनुसार प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १२१ दशमलव शून्य ५, मूल्य आम्दानी अनुपात ३९ दशमलव ७५ गुणा, तरलता अनुपात १० दशमलव ९० प्रतिशत, प्रतिशेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य रू. ८९९ दश्मलव ९१ पैसा रहेको छ ।
समीक्षा अवधिमा कम्पनीले आफ्नो वित्तीय अवस्था थप मजबूत बनाउँदै लागेको छ । पूँजी वृद्धि गरेसँगै प्रतिशेयर आम्दानीलाई सन्तुलनमा राख्न सक्नु र निष्क्रिय कर्जा अनुपात शून्य प्रतिशत कायम गर्नु लघुवित्तको सफलता हो ।
प्राविधिक विश्लेषण : फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेण्ट बैङ्क प्रवृत्तिहीन
प्रतिरोध २ : ९०० । प्रतिरोध १ : ८५० । हालको अन्तिम मूल्य : ८१० । टेवा १ : ७९२ । टेवा २ : ७३०
यस कम्पनीको २१ नोभेम्बर, २०१७ सम्मको दैनिक मैनबत्ती चार्टको आधारमा अन्तिम कारोबार मूल्य ८ सय १० मा रहेको छ । यो अघिल्लो दिनको भन्दा १२ अङ्क अर्थात् १ दशमलब ५० प्रतिशत कम हो । अन्तिम दिनको परिमाण ३ हजार ६५ मा रहेको छ । यो अघिल्लो दिनको भन्दा २ हजार ९ सय ४५ कित्ता कम हो ।
१२ सेप्टेम्बर, २०१७ मा मूल्यले ९ सय ८ को उच्च बिन्दु प्राप्त गर्न सके पनि त्यसपछिका उचाइ घटिरहेको देखिन्छ । चार्टमा देखिएबमोजिम माथिल्लो र तल्लो प्रवृत्ति रेखाहरूले डिसेण्डिङ ट्र्याङ्गलको आकृति बनाएको देखिन्छ । यसले बजारमा विक्रेताको चाप रहेको सङ्केत गर्दछ । हाल मूल्य तल्लो प्रवृत्ति रेखा अर्थात् टेवाक्षेत्रमा रहेको देखिन्छ ।
एक्सपोनेन्सियल मुभिङ एभरेज (ईएमए) : मूल्य हाल प्रवृत्तिहीन रहेकाले १४ दिनको ईएमएले दिएको सङ्केत प्रभावकारी देखिँदैन ।
रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इण्डेक्स (आरएसआई) : १४ दिनको आरएसआई २१ देखि ४० अङ्कमा आएको देखिन्छ । यसको प्रवृत्ति हेर्दा बजार सकारात्मक भइहालेको देखिँदैन ।
मैनबत्ती : अन्तिम दिनको मैनबत्तीले स्पिनिङ टपको आकृति बनाएको देखिन्छ । यसले बजारको प्रवृत्ति परिवर्तन हुन सक्ने सङ्केत गरे तापनि अर्को कारोबार दिनको मैनबत्ती पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
मूल्यको प्रवृत्ति र उल्लिखित सूचकहरूलाई समग्र रूपमा हेर्दा मूल्य प्रवृत्तिहीन र हाल टेवाक्षेत्रमा रहेको देखिन्छ । हाल बजारमा लगानीकर्ताहरू अन्योल अवस्थामा रहेको देखिएकोले ‘पर्ख र हेर’को अवस्था रहेको देखिन्छ । हालको तत्कालीन प्रतिरोध ८ सय ५० मा रहेको देखिन्छ भने तत्कालीन टेवा ७ सय ९२ मा रहेको देखिन्छ ।
५ चैत्र २०७४, सोमबार १८:३४
सिद्धार्थको हकप्रद भर्ने मङ्गलवार अन्तिम दिन
५ चैत्र २०७४, सोमबार १६:४२
सिद्वार्थको हकप्रद भर्ने मङ्गलवार अन्तिम दिन
५ चैत्र २०७४, सोमबार १६:३०
घट्दो बजारले लगानीकर्ता निराश, कारोबार रकममा कमी
५ चैत्र २०७४, सोमबार १५:५७